Yangu yepamhepo Yekutengesa Yekutarisa muPamberi Yekuraira | Martech Zone
Yangu yepamhepo Yekutengesa Yekutarisa muPamberi Yekuraira
Svondo, Zvita 2, 2012 Chitatu, December 12, 2012 Douglas Karr
Iko kune toni yezvinhu izvo zvinoda kuzadzikiswa kuti zviwedzere zvizere nzira yekutengesa yepamhepo, asi ini ndinowanzo shamiswa nekukosheswa uko makambani anoisa chinhu chimwe nechimwe pane yekutarisa. Sezvo isu tichitora kune vatengi vatsva, isu tiri kutsvaga kuona kuti marongero ane zvakanyanya kukanganisa anozadziswa kutanga… kunyanya kana zviri nyore. Zano: zvemukati zvekushambadzira uye zvemagariro midhiya kushambadzira hazvisi nyore.
Website - Iyo kambani ine webhusaiti inomutsa mhinduro kubva kune vateereri vako kuti zvese inovimbika sosi yeruzivo uye kuti chigadzirwa kana sevhisi ichabatsira kune izvo mushanyi zvaanoda?
kupana nduma - Saiti iyi ine nzira yekutenga kana kukumbira mhinduro kubva kumuenzi? Kana usiri kutengesa chigadzirwa, rino rinogona kunge riri peji rekumisikidza nefomu kuunganidza ruzivo rwemushanyi mukutengesa kwekuratidzira kana kurodha kweimwe mhando.
Chiyero - Chii analytics zvishandiso zvaunazvo munzvimbo yekuyera chiitiko uye nekukubatsira iwe kugadzirisa yako yese online kushambadzira kuita?
Sales - Iyo kambani inoteedzera sei kune vashanyi vanoita? Iyo data yakatorwa muCRM? Kana kuti inovhura nzira yekushambadzira otomatiki kunyorera uye kupindura kutungamira?
enamel - Une chirongwa cheemail chinogara chinopa vatengi zvinhu zvakakosha uye / kana tarisiro nezvirimo zvinozovatyaira vadzokere kune yako saiti uye vozvishandura kuva vatengi?
famba - Saiti yacho yakagadzirisirwa nharembozha uye piritsi? Kana zvisiri, urikushayikwa nevanoverengeka vevashanyi vangangoda kuita tsvakiridzo pazita rako asi vari kusiya nekuti yako saiti haina kugadzirirwa kuti vatarise.
kutsvaka - Iye zvino zvaunenge uine saiti yakakura uye yakasimba nzira yekutora zvinotungamira, ungaita sei kuti ukure iyo nhamba inoenderana inotungamira? Yako saiti inofanirwa kuvakwa pane zvemukati manejimendi sisitimu yakagadzirirwa kutsvagisa. Zvemukati zvako zvinofanirwa kushandisa keywords zvinobudirira.
Local - Vashanyi vari kutsvaga chigadzirwa chako kana sevhisi vari kuvatsvaga mudunhu? Wakagadzirisa zvemukati zvako kusimudzira zvigadzirwa zvako nemasevhisi mudunhu? Unogona kuda kuwedzera mapeji ayo tarisa kutsvaga kwenzvimbo mazwi. Bhizinesi rako rinofanirwa kuverengerwa pane zveGoogle neBing madhairekitori ebhizinesi.
Reviews - Pane nzvimbo dzekuongorora dzemhando yezvigadzirwa nemasevhisi aunopa? Bhizinesi rako kana chigadzirwa chakanyorwa pazviri here? Iwe unayo nzira yekutyaira hukuru kuongororwa kune iwo masayiti nevatengi vako varipo? Sites senge Chinyorwa chaAngie (mutengi) uye Yelp inogona kutyaira yakawanda bhizinesi!
gutsikana - Iwe une nzira dzekuramba uchitsikisa zvirimo pane yako domain izvo zvakakosha kune vako vateereri vateereri? Kuve neyako blog blog inzira inoshamisa yekunyora izvo zvazvino, kazhinji uye zvinehunhu zvemukati zvinodiwa nevateereri vako. Shandisa zvakasiyana midhiya kukwezva vateereri vakasiyana… zvinyorwa mumablog blog, mifananidzo mumachati, magadziriso e instagram uye infographics, odhiyo mune podcast, uye vhidhiyo muYouTube uye Vimeo inogadziridza. Uye usakanganwa maturusi ekudyidzana! Calculator uye zvimwe zvishandiso zvinoshamisa pakukwezva nekubata vateereri.
Social - Une account ye Twitter here? LinkedIn peji? Facebook peji? Peji yeGoogle +? Instagram profile? Pinterest peji? Kana iwe uchikwanisa kugadzira zvinowirirana zvemukati zvemukati uye chengetedza yakavhurika tambo yekutaurirana, kuburikidza nehukama, nevatengi vako uye tarisiro, zvemagariro zvinogona kubatsira kukwidziridza meseji yako kune mamwe akakodzera maratidziro etarisiro nekuvaka nharaunda yevateveri. Uri kushandisa sei vateveri vako kusimudzira bhizinesi rako?
ushambadzi - Iye zvino sezvo uine nzira dzese dzekugadzira, kupindura nekukudza meseji yako, inguva yekuisimudzira futi. Kutsvaga kwakabhadharwa, kutsigirwa zvakatumirwa, Kushambadzira Facebook, Kushambadzira paTwitter, Kushambadzira kweYouTube, kudyidzana neruzhinji, kuburitswa kwenhau… zvave kuita zviri nyore uye kutengeka zvakanyanya kusimudzira zvirimo mune mamwe maratidziro akakodzera. Iwe unogona kusakwanisa kupinda mune aya ma network kuburikidza nezvakakura zvemukati wega, asi iwe kuwana kunowanzo kupihwa kuburikidza kushambadzira.
kushandisa michina - iyo nhamba yemasvikiro uye network iri kukura zvakanyanya uye zvakaomarara zuva rega rega, asi zviwanikwa zvatiri kupa zvekushambadzira madhipatimendi hazvisi kuwedzera padanho rakaenzana. Izvi zvinogadzira otomatiki inofanirwa mazuva ano. Iko kugona kushambadzira chaiko meseji panguva yakakodzera, kuongorora uye nzira zvikumbiro kubva kune chero network uye ugozvipa kune chaicho sosi, kugona kukora uye otomatiki kupindura kune zvinotungamira zvichibva padanho ravo rekuita, uye nzira yekuunganidza iyi data mune inoshandiswa system… otomatiki ndiyo kiyi yekuwedzera kushambadzira kwako pamhepo.
Diversity - izvi zvinogona kusanyanya kuita zvinyorwa, asi ini ndinotenda kuve netiweki yehunyanzvi kuti ikubatsire neako epamhepo ekushambadzira ekuedza kwakakosha. Vazhinji nyanzvi dzekutengesa vane hunyanzvi hwavanogadzikana nahwo. Dzimwe nguva ivo vanogadzikana zvekuti svikiro ravanokoshesa rinotora pekutanga uye aya mamwe maitiro anoshaikwa zvachose. Kumbira nyanzvi yekutengesa email, semuenzaniso, nezvekuvaka nharaunda yeFacebook uye vanogona kukuseka - kunyangwe makambani mazhinji achityaira bhizinesi rakawanda kuburikidza neFacebook. Kukwereta kubva kune hunyanzvi hwetiweki yako kazhinji kunokupa iwe nzwisiso mune zvimwe zvidzidzo, mamwe maturusi, uye mimwe mikana yekuwedzera ako ekushambadzira epamhepo.
Testing - Kuburikidza neese iteration yemazano ese, mukana wekuita A / B uye multivariate kuyedza ndeimwe isingafanire kufuratirwa. (Ini ndakanyatsozvitarisisa apa nekutenda Robert Clarke of Op Ed Kushambadzira, takawedzera!)
Uku ndiko kukoshesa kwangu apo ini ndiri kuongorora bhizinesi 'epamhepo kushambadzira kuyedza asi inogona kunge isiri yako neimwe nzira. Ndezvipi zvimwe zvaunotsvaga muhurongwa hwekushambadzira pamhepo? Pane chandakapotsa here? Yangu odha yezvinhu zvekutanga yakamisikidzwa?
Ini ndakakurukura iyi yekutarisa mune ichangopfuura podcast:
Tags: kushambadzamuchisokupindukapatanifacebook adslocal searchMarketingYeMahara neThebhu Kushambadzirakushambadzira kwepamhepooptimizationSearch Engine OptimizationTsvaga KutengesaseopiritsiWebsite
Maitiro Ekuwedzera Email Kero kune LinkedIn
Dec 3, 2012 pa 11: 22 AM
Yakakura blog Douglas, ini ndinogona zvakare kuwedzera CRO (Shanduko Rate Optimization) kuburikidza neA / B uye Multivariate kuyedza kune iyo rondedzero - saiti inogona kungogoneswa zvechokwadi kuburikidza nekuyedza, kuyedza, kuyedza 🙂
Dec 3, 2012 pa 11: 44 AM
Yakatanhamara, wakanyatsotaura - ndiri kuzowedzera izvozvo!
Zvita 3, 2012 na12: 15 PM
Ndatenda Douglas. Pane sidenote, ini ndinoona Delivra yako email inotsigira (kumusoro kurudyi kona). Takashanda pamwe navo uye tiri vateveri vakuru, tinogona kuvakurudzira kwazvo 🙂
Zvita 3, 2012 na1: 55 PM
Neil nekambani yake zvinoshamisa, Robert. Ivo vakadaro maoko-pakambani nevatengi vavo… zvinotyisa kuvaona vachikura.